China Factory N'ogbe Aluminom Classic vintage oche factory na suppliers | Sun Master
Nọmba nlereanya: WA -1123
Agba: dị ka katalọgụ dị ka arịrịọ onye zụrụ ya si
Ụdị No. WA-1123
Ụdị ANYANWU NKE Ibu ibu 855pcs / 40'HQ
Isi ihe Aluminom tube Dia.28xT1.5mmOchie okokụre na ntụ ntụ mkpuchi finishing
eriri rọba ojii ojii
1.Full oche aluminom, ihe ochie na-emecha na mkpuchi ntụ ntụ n'èzí. Ihe eji eme vintage a na-eme n'aka na-enye ụdị dị iche iche maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, cyber cafer, patio na ebe obibi.
Ịgbado ọkụ zuru oke na nchacha na-eme ka ọ maa mma na anwụ. Oche aluminom dị n'èzí dị ọkụ na nke siri ike. Dị ka anyị si mara, ígwè nwere ike ịta nchara ma ọ bụrụ na ekpughere ya na gburugburu mmiri. Ihe mkpuchi ntụ ntụ bụ ụzọ kachasị mma iji dịrị ogologo oge maka elu, a pụkwara iji ya mee ihe ruo afọ 15 n'enweghị nsogbu.
Anti-oxidation, na-eji ihe dị arọ na nchekwa gburugburu ebe obibi. ndụ ọrụ na-adịgide adịgide, Ọ nwere ike iburu 100KG.
Nke gara aga: Oche ụlọ ahịa Wicker Rattan ejiri aka mee
Osote: Ogige Rattan Wicker Round Egg shape
Ihe na-ekpo ọkụ na-ere mpịachi n'èzí ngwá ụlọ ígwè Pat...